Show All Most Popular Cutlery Breakfast (10:00-11:59 Am) Appetizer & Salad Bakery & Sauces Homemade Burger Main Menu Feast Meal Pizza Pasta Brunch Side Menu Desserts Rice Beer (Time to Relaxed) Coffee Fresh Natural Juice - Sugar Free Cold Drinks Fresh Fruits Latte Mocktail
Breakfast (10:00-11:59 Am)
Bakery & Sauces
Beer (Time to Relaxed)
Fresh Natural Juice - Sugar Free
Fresh Fruits Latte
Golden City Condominium,, Yangon, MM Yankin
#1 SALES I Classic Cheese Burger with Sweet Potato Fries (ကြက်ဥများများဘာဂါနှင့် အာလူးချောင်းကြော်)(ၾကက္ဥမ်ားမ်ားဘာဂါႏွင့္ အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္)
Choice of 'Chicken' or 'Beef' patty, Cheese, Tomato Tomatoes, Lettuce, Onion, Homemade pickled cucumber, Homemade Burger Bun.
ကြက်သား (သို့) အမဲသား ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ဆလပ်ရွက် ၊ကြက်သွန်နီ ၊ အိမ်လုပ်သခွားပုသနပ်၊ အိမ်လုပ်ဘာဂါပေါင်မုန့်
BEST SELLER I Classic Carbonara
Italian classic, Choice of 'Pork Bacon' or 'Chicken' meat, Egg, Parmesan cheese, Black Pepper. (No Cream Sauce.)
ရောင်းအားအကောင်းဆုံး အကောင်းစား ကာဘိုနားရား ခေါက်ဆွဲ - အီတလီစတိုင်၊ကြက်ဥ၊ဝက်ဆားနယ်ခြောက်၊ ငရုပ်ကောင်း ပါမစန်ချိစ်(ခရင်မ်ဆောစ့်နှင့်မဟုတ်ပါ)
Bolognese Spaghetti (ဘိုလိုနိစ် ပါစတာခေါက်ဆွဲ)(ဘိုလိုနိစ္ ပါစတာေခါက္ဆြဲ)
Italian classic, Choice of Minced 'Beef' or 'Chicken' meat, Tomato sauce base, Parmesan Cheese, Parsley.
အကောင်းစားအီတလီစတိုင်၊ အမဲသား သို့မဟုတ် ကြက်သား၊ ခရမ်းချဉ်သီးဆောစ့်
Crunch tortilla chips topped with zesty 'beef' or 'chicken'-Mexican spiced and of course heaps of cheese. Comes with Extra Salsa sauce. Tip. Add on your favorite toppings.
ကြွပ်ရွနေသော တိုတီလာအချပ် လေးများ ပေါ်မှာ ချိစ် နှင့် အရသာစူးစူးရှရှ မက်ဆီကို အမွှေးကြိုင်များ ပါ၀င်တဲ့ ကြက်သား သို့မဟုတ် အမဲသား နဲ့ရနိင်ပါတယ် ၊ ဆယ်ဆာဆောစ့် အပိုပါပါမည် ။ အကြံပေးချက် - မိမိ နှစ်သက်ရာဆောစ့်များနှင့်လည်း တွဲဖက်စားသုံးနိင်ပါသည် ။
Classic hawaiian pizza, choice of 'tomato sauce' or ' creamy mushroom sauce', mozzarella cheese, cooked chicken ham, pineapples. Tips: dip the edges in our garlic sauce.
အကောင်းစား ဟာဝေယံ ပီဇာ၊ ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ် (သို့) မှိုခရင်မ်ဆော့စ် ၊ မိုဇာရယ်လာချိစ့် ၊ ဟမ်ကြက်သားပြား၊ နာနတ်သီး အကြံပြုချက် - ပီဇာအနားသားလေးတွေကို ကြက်သွန်ဖြူဆောစ့်နဲ့တွဲဖက်စားသုံးလျင် အရသာပိုရှိပါတယ်
Mozzarella, Basil pesto, Tomato sauce Tips: Dip the edges in our garlic sauce.
လတ်ဆတ်သော မိုဇာရယ်လာချိစ်၊ ဘေဇယ် ပတ်စရိုဆောစ့် ၊ ခရမ်းချဥ်သီးဆော့စ် အကြံပြုချက် - ပီဇာအနားသားလေးတွေကို ကြက်သွန်ဖြူဆောစ့်နဲ့တွဲဖက်စားသုံးလျင် အရသာပိုရှိပါတယ်
SIGNATURE I CDS Burger with Sweet Potato Fries
Choice of 'Chicken' or 'Beef' patty, Cheese, Prawn, Bacon, Tomato Chutney, Caramelized Onion, Avocado, Cheese, Tomatoes, Lettuce, Onion, Homemade pickled cucumber, Homemade Burger Bun.
BBQ Pulled Meat Burger with Sweet Potato Fries (ကြွပ်ရွနေသော ငါးဘာဂါနှင့် အာလူးချောင်းကြော်)(ႂကြပ္႐ြေနေသာ ငါးဘာဂါႏွင့္ အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္)
Choice of pulled 'Chicken' or 'Pork' meat, Coleslaw, caramelized onion, Homemade Burger Bun.
ကြက်သားမွှ သို့မဟုတ် ဝက်သားမွှ ရွေး​ပေးပါ ဂေါ်ဖီသုပ် ၊ ကြက်သွန်နီချိုချက် ၊ အိမ်လုပ်​ပေါင်မုန့်
Korean Bulgogi Burger with Sweet Potato Fries (ကိုရီးယား ဘူဂိုးဂီဘာဂါနှင့်အာလူးချောင်းကြော်)(ကိုရီးယား ဘူဂိုးဂီဘာဂါႏွင့္အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္)
Korean Bulgogi sauce marinated. Choice of 'Chicken' or 'Beef' patty, cheese, tomato, lettuce, onion, Homemade pickled cucumber, Homemade Burger Bun.
(ဘူဂိုးဂီဆော့စ်နှပ်၊ ကြက်သား (သို့) အမဲသား ၊ ချိစ် ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ဆလပ်ရွက် ၊ကြက်သွန်နီ၊ အိမ်လုပ်သခွားပုသနပ် ၊ အိမ်လုပ်ဘာဂါပေါင်မုန့်)
MeatMyan Pizza (For Meat Lovers)
Choice of 'Beef' or 'Chicken', Cooked Chicken ham, Chicken sausage, Tomato sauce, Mozzarella, Parmesan cheese Tips: Dip the edges in our garlic sauce.
အမဲသား (သို့) ကြက်သား ရွေးချယ်ပါ ။ ဟမ်ကြက်သားပြား၊ ကြက်အူချောင်း၊ ခရမ်းချဉ်သီး ဆော့စ် ၊ မိုဇရယ်လာ ချိစ့် ၊ ပါမစန် ချိစ်
အကြံပြုချက် - ပီဇာအနားသားလေးတွေကို ကြက်သွန်ဖြူဆောစ့်နဲ့တွဲဖက်စားသုံးလျင် အရသာပိုရှိပါတယ်
A warm, freshly toasted English muffin, topped withasavory hot sausage patty andaslice of melty American cheese.
Tomato& Egg MingMuffin
A freshly cracked Grade A egg onatoasted English Muffin topped with real butter and add lean chicken ham and fresh lettuce & tomatoes. Delicious and healthy.
Egg Ming Muffin
An excellent source of protein and oh so delicious. We placeafreshly cracked Grade A egg onatoasted English Muffin topped with real butter and add lean chicken ham and melty American cheese. *300 calories.
Sausage& Egg MingMuffin
A savory hot sausage,aslice of melty American cheese, andadelicious freshly cracked egg all onafreshly toasted English muffin.
Greek Salad (ဂရိအရွက်သုပ်)(ဂရိအ႐ြက္သုပ္)
Fetta cheese, Tomatoes, Cucumbers, Onions, Olives, Extra virgin olive oil
ဖက်တာချိစ် ၊ ခရမ်းချဉ်သီး ၊ သခွားသီး ၊ ကြက်သွန်နီ ၊ သံလွင်သီး ၊ အမှန်အကန် အစစ်အမှန် သံလွင်ဆီ
Chef's recommend daily soup
စားဖိုမှူး အကြံပြုသော နေ့စဉ် စွပ်ပြုတ်
NEW I Buttery Whole Garlic Bread
Garlic bread tastes best fresh from the oven. Crushed fresh garlic & fresh herbs, tons of butter!
English Muffin, 4ea
Bake every morning! Fresh & Delicious and Healthy!
နေ့စဉ် နံနက်တိုင်း ဖုတ်လုပ်သည်။ လတ်ဆတ်၊ အရသာရှိ ၍ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သည် ။
နေ့စဉ် နံနက်တိုင်း ဖုတ်လုပ်သည်။ လတ်ဆတ်၊ အရသာရှိ ၍ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သည်။
Homemade Burger Bun4pcs
Tomato Sauce, for Pasta & Pizza, 300ml
BEST SELLER I A-Thar EggMany Burger I with Sweet Potato Fries
Choice of ‘Beef‘ or ‘Chicken’ patty, Fluffy scrambled egg, Tomato, Lettuce, Onion, Homemade pickled cucumber, Signature chili mayo sauce& mustard, homemade burger bun.
ကြက်သား (သို့) အမဲသား ၊ နူးညံ့သော ကြက်ဥမွှေကြော် ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ဆလပ်ရွက်၊ကြက်သွန်နီ၊သခွားပုသနပ်၊ ရှယ်လုပ်ထားသော ငရုတ်သီးမရိုဆောစ့်နှင့်မုန်ညင်းအနှစ်ဆောစ့်၊ အိမ်လုပ်ဘာဂါပေါင်မုန့်
NEW I Tenderloin Steak &3Side Menus
Organic tenderloin 200g, choice of3side dishes, choice of sauce
Organic Tenderloin 200g, Lobster: 260 to 280g, Choice Of3Side Dishes. Choice Of Sauce.
Black Angus I Slow Cooked Rump Steak
Black angus rump steak 200g with wholegrain mustard, slow cooked. Cabbage and juniper berry, carrot velvet, brown jus
NEW I Pork Chop Deluxe
Slow-cooked juicy meaty tender pork chop 330 to 360gram& wholegrain mustard sauce, pumpkin puree, potato fondant, and other garnishings. Pork: danish breed shan state
NEW I Meaty Hamburg Steak
Perfectly seasoned homemade chicken & beef & pork patties & cream or tomato sauces on your choice, spicy mango bruschetta, tomato chutney
Garlic Butter Grilled Lobsters
Lobster 250g Choice of3Side Dishes.
Peri Peri Whole Leg Platter
Portuguese style spicy chicken whole leg with2side dishes,a combination of juicy chicken grill and peri peri sauce, best seller, tips, try with extra peri peri or BBQ sauce
ပေါ်တူဂီစတိုင်ကြက်သားဟင်း ၂ မျိုးနှင့်အတူခြေထောက်၊ အရည်ရွှမ်းသော ကြက်သားကင်နှင့် ပဲရီပဲရီအချဉ်၊ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး သိကောင်းစရာများ ပဲရီပဲရီအချဉ် သို့ BBQ အချဉ်ဖြင်တွဲဖက်၍ စားပါ
Hell Peri-Peri Combo
Choice Of Spicy Level, Portuguese Style Spicy Chicken Wings With3Side Dishes. A Combination Of Juicy Chicken Grill And Peri-Peri Sauce. Bestseller.
Chili Mayo Chicken
First: Bake In The Oven, Remove Bad Fats! Second: Fry In Clean Oil, Moist Inside & Crispy Outside! A Magical Chicken That Keeps You Addicted. Spicy, Soft, Savory, Sweet, And Sour.
Pride Fried Chicken
Half: The original menu is cooked in the oven and then fried. The inside is moist and the outside is crispy. Half: A magical chicken that keeps your hands going withabite. Spicy, savory, sweet, sour, soft! Combo incl. Roasted Potatoes, Carrots, Sweet Corns, Cole Slow
ကြက်ကြော် တစ်ဝက် နှင့် တစ်ဝက် အရော - ပထမဦးစွာ အဆီများကို ဖယ်၍ အိုဗမ်ထဲတွင် ကင်သည်။ ထို့နောက် ဆီသန့်ဖြင့်ကြော်၍ အတွင်းထဲတွင် စွတ်စို၍ အပြင်ဘက်တွင် ကြွပ်ရွသည် ၊၊ ပွဲကြီးတွင် အာလူးကင် ၊ ဥနီကင် ၊ ပြောင်းဖူး နှင့် ဂေါဖီသုပ် ပါဝင်သည်
BEST SELLER I Peri Peri Whole Chicken
Portuguese style spicy chicken. A combination of juicy chicken grill and peri-peri sauce. Bestseller. Tips: Try with Extra Peri Peri or BBQ Sauce
ပေါတူဂီ စတိုင် ကြက်သားအစပ် ၊ အရည်ရွှမ်းသော ကြက်သား ကင် နှင် ပဲရီ-ပဲရီ အချဉ် ။ ( ရောင်းအားအကောင်းဆုံး ) သိကောင်းစရာ များ - ပဲရီ-ပဲရီ အချဉ် (သို့) BBQ အချဉ်ဖြင် တွဲဖက်၍
Bacon, Choice of 'beef' or 'chicken' crushed meat, homemade gherkin, American cheddar cheese, mozzarella cheese, tomato sauce, parmesan cheese [TIPS] Dip the edges in our garlic sauce
Mexican Meat Ball Pizza Spicy
Choice of beef or chicken meatballs, jalapeno, signature spicy sauce & tomato sauce, mozzarella, parmesan cheese, [TIPS] Dip the edges in our garlic sauce
SIGNITURE I Carbonara Pane Spahgetti
Toast bread bowl, Choice of 'Pork Bacon' or 'Chicken' meat, caramelized onions, poached egg, Parmesan cheese, Black Pepper, Cream Sauce base.
မီးကင်ပေါင်မုန့်ခွက်၊ ဝက်ဆားနယ်ခြောက် သို့မဟုတ် ကြက်သား ၊ကြက်သွန်နီချက်၊ကြက်ဥပေါင်း၊ပါမစန်ချိစ်၊ ငရုပ်ကောင်း၊ ခရင်မ်ဆောစ့်
BEST SELLER I Shanghai Seafood Pasta (SIGNITURE I ပန်နီး ကာဘိုနားရား ခေါက်ဆွဲ)(SIGNITURE I ပန္နီး ကာဘိုနားရား ေခါက္ဆြဲ)
Asian-inspired source. Mussels, Shrimp, Cuttlefishes, clams, Bokchoy, Chilli flakes.
အရှေ့တိုင်းစတိုင် ၊ ယောက်သွား၊ပုဇွန်၊ကင်းမွန်ငါး၊ခုံးကောင်၊ထိုင်ဝမ်မုန်ညင်း၊ငရုတ်သီးချက်ဆီ၊ငရုတ်သီးမှုန့်
Seafood Tomato Pasta (ခရမ်းချဉ်သီးပင်လယ်စာပါစတာခေါက်ဆွဲ)(ခရမ္းခ်ဥ္သီးပင္လယ္စာပါစတာေခါက္ဆြဲ)
Italian classic, Tomato-based. Mussels, Shrimp, Cuttlefishes, clams
Meat Ball Pasta (အသားလုံးပါစတာခေါက်ဆွဲ)(အသားလုံးပါစတာေခါက္ဆြဲ)
Choice of 'Chicken' or 'Beef' meatball, Tomato sauce base, Parmesan cheese.
ကြက်သားလုံး (သို့မဟုတ်) အမဲသားလုံး ၊ ခရမ်းချဉ်သီးဆောစ့် ၊ ပါမစန်ချိစ်
SIGNATURE I Steak Pasta, Mix& Match
First, the choice of sauce, comes with choice of ‘Slow-cooked chicken breast steak’ or ‘Jack's creek black angus organic tenderloin steak 200g’
Quesadillas & Salad (ကွာစဒီလာ နဲ့ အရွက်သုပ်)
Choice of 'Chicken' or 'Beef' or 'Vegetarian', Mozzarella Cheese, Roasted vegetables, Homemade tortilla, Green salad & Lemon dressing.
ကြက်သား သို့မဟုတ် အမဲသား သို့မဟုတ် သတ်သတ်လွတ်ရွေးပေးပါ မိုဇာရယ်လာချိစ် ၊ အသီးအရွက်ကင်များ၊ အိမ်လုပ်မက်ဆီကိုချပါတီ ၊ လီမွန်ဆော့စ်နဲ့အရွက်သုပ်
Grilled Cheese Sandwich (ချိစ်ကင်ညှပ်ပေါင်မုန့်)
Homemade Toast Bread, Cheddar Cheese, Sunny Side Up Egg Tip. Kids favourite!
အိမ်လုပ်ပေါင်မုန့် ၊ ချက်ဒါချိစ် ၊ ကြက်ဥမကျက်တကျက် မှတ်ချက် - ကလေးများအကြိုက် (အမေရိကန် ပုံစံ)
Kebab & Salad (ဂီဘတ် နဲ့ အရွက်သုပ်)
Choice of 'Beef' or 'Chicken' or 'Vegetarian', Homemade Tortilla Wrap, Lettuce, Onion, Tomato, Cucumber, Green Salad & Lemon Dressing
ကြက်သား သို့မဟုတ် အမဲသား သို့မဟုတ် သတ်သတ်လွတ်ရွေးပေးပါ၊ အိမ်လုပ်မက်ဆီကိုချပါတီ ၊ ဆလပ်ရွက်၊ ကြက်သွန်နီ ၊ ခရမ်းချဉ်သီး ၊ သခွားသီး ၊ လီမွန်ဆော့စ်နဲ့အရွက်သုပ်
BEST SELLER I EggMany Sandwich
Homemade Toast Bread, Slice Chicken Ham, Soft Scrambled Egg, Tomatoes, Lettuce, Signature Chili Sauce
BEST SELLER I TunaMany Sandwich
Homemade toast bread, tuna& onion stuffing, slice of pickles, tomatoes, homemade mayo sauce, mustard sauce
Choice Of 'Chicken' Or 'Beef' Meat Ball With Tomato Sauce, Slice Cheese.
NEW I Cheesy Fries
NEW I Sweet Potato Fries
Fresh carrots roasted with butter and garlic. Carrots are good source of beta carotene, fiber, vitamin K1, potassium, and antioxidants.
SIGNATURE I Mashed Potatoes
Incredibly creamy mashed potatoes.
Red Velvet Cake – Piece
French classic and custard cream
Cakey on the outside and fudgy in the middle!
Rich Chocolate Cake, Piece
Fudgy chocolate cake is so rich and decadent, with the perfect balance of fluffy and fudgy
New I White Chocolate Cake -Callebuat
Made with Callebuat White Chocolate, The Finest Belgian Chocolate
Blueberry Cheese Cake, Piece
New I Milky Mirror Glaze Mousses
NEW I KOREAN Kimchi Fried Rice
Original Korean recipe, Sunny side up egg, Choice of Rice & Meat. Kimchi is imported from South Korea
BBQ Pulled Meat Rice
Choice of pulled chicken or pulled pork, coleslaw, caramelized onion, choice of rice
Spanish Seafood Rice and Fresh Tomato Salad
Spanish seafood rice with fresh tomato salad, tips; try rice and tomato salad at the same bite
Produced by Mexican brewery Cervecería Modelo. Best with lime or Lemon.
100% Juice without sugar. Fresh and Healthy! Add on Sugar if you need more sweetness.
Fresh Lemonade- Detox Diet
Fresh lemon juice with soda water. Detox your body! Add on Sugar if you need more sweetness.
Flavored fruits puree with soda
Fresh strawberry is back, No sugar added. Please request sugar syrup if needed.
Fresh mango is back, No sugar added. Please request sugar syrup if needed.
Fresh ginger, fresh orange, passion fruits, soda
100 % Apple juice, raspberry & strawberry puree, grenadine syrup, fresh lime juice